रिलिज अगावै ‘वडा नम्बर ६’ ले मोफसलबाट ‘मिनिमम’ ३५ लाख पाउने पक्का ! « Mazzako Online
रिलिज अगावै ‘वडा नम्बर ६’ ले मोफसलबाट ‘मिनिमम’ ३५ लाख पाउने पक्का !
मज्जाको अनलाईन समाचार, काठमाण्डौं, माघ १२–
केहि दिनअघि वितरक सुनिल मानन्धरले वर्षकै एक प्रतिक्षित फिल्म ‘नाई नभन्नु ल ३’ लाई ३५ लाख मिनिमम ग्यारेन्टी (एमजी) दिएर काठमाण्डौंका लागि प्रदशर्न अधिकार लिए । काठमाण्डौमा यत्ति धेरै एमजी दिएर वितरकले फिल्म जिम्मा लिएको सम्भवत : यो पहिलोपटक भएकाले पनि यसले निकै चर्चा पायो ।
‘वडा नम्बर ६’ लाई राजधानी बाहिर अर्थात मोफसलका लागि वितरक कम्पनी एफडीले ३५ लाख एमजी दिएको निर्मात्री दिपाश्री निरौलाले मज्जाको अनलाईनसंग बताएकी हुन् । अब मोफसलमा यो फिल्मले व्यापार गरेपनि नगरेपनि एफडीले निर्मातालाई ३५ लाख दिनेछ । भर्खरै सम्पन्न ‘वडा नम्बर ६’ का निर्माताहरु र एफडी कम्पनीका प्रमुख प्रदिप कुमार उदयविचको छलफलपछि यस्तो निष्कर्ष निस्किएको हो । यसरी एफडीले एमजी दिएको सम्भवत : पहिलोपटक रहेको बताइएको छ ।